Onye dị afọ asatọ nwere alopecia, ọrịa na-egbu ntutu, rịọrọ ka ọ hapụ ụlọ akwụkwọ maka 'ogologo ntutu - Ụwa 2022
Onye dị afọ asatọ nwere alopecia, ọrịa na-egbu ntutu, rịọrọ ka ọ hapụ ụlọ akwụkwọ maka 'ogologo ntutu
Otu nwata nwoke Filadelfia nwere ọrịa isi nkwọcha na-adịghị ala ala bụ ụlọ akwụkwọ zipụrụ ya n'ụlọ n'ihi oke ntutu isi ya.
Sion Williams dị afọ asatọ na-anata ọgwụgwọ maka ọrịa a na-akpọ alopecia na Mahadum Drexel nke gụnyere ịgba ntụtụ na-egbu mgbu n'isi. Ndị dọkịta na mmemme ahụike mahadum Philadelphia gwara nne Williams Talia Mann ka ọ hapụ ntutu ya tolite ma ọ dịkarịa ala izu iri.
Wenezde gara aga, a tụgharịrị Williams na Shiloh Christian Academy dị na Philadelphia maka imebi iwu ntutu isi nke ụlọ akwụkwọ ahụ. Mann kwuru na ya debere akwụkwọ dọkịta n'ụlọ akwụkwọ ahụ ka nwa ya nwoke nwee ntutu ogologo ogologo gaa.
"Echere m na ọ bụ enweghị obi," Mann gwara Fox29 Philadelphia. "Ọ bụ enweghị obi na ọ ga-ewepụ ya n'ụlọ akwụkwọ n'ihi ihe dị mfe dị ka ịkpụ ntutu."
"Ọ na-agbapụ n'isi ya ma na-enye ya ohere ito ntutu. Ọ bụrụ na ha chọrọ ka anyị bee ya, ọ ga-ewepụ uto ahụ dị mma, "ka ọ gbakwụnyere.
Ọ bụ ezie na ndị isi ụlọ akwụkwọ gwara ndị mgbasa ozi na ha nwere ikike zuru oke ịgọnarị ntinye Zaịọn n'ihi na ha bụ ụlọ ọrụ nkeonwe, a ga-ahapụ onye mmụta nke abụọ na Tuesday. Ọdịnihu ya bụ nke a na-ejighị n'aka mgbe ezinụlọ kwuchara mmekọrịta mebiri emebi na ụlọ akwụkwọ mgbe ihe ahụ mere.
Alopecia bụ ntutu isi nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-ebute ụzọ na-awakpo ntutu isi nke na-ebute uto ntutu.
Enwere ụdị alopecia atọ:
1. Alopecia areata - Ọnwụ nke mpe mpe akwa na ntutu isi.
2. Alopecia totalis - Ntutu ntutu zuru oke n'isi.
3. Alopecia universalis - Ntutu ntutu zuru oke na ahụ.